Taona amin'ny famerenana
Nahoana no Prairie
Hihaona Aminao Amin'ny Fito
Tambajotra fanaintainan'ny tratra
Ry mpiambina ô
Aretin'ny peripheral artery
Mitadiava Dokotera sy APC
Manaova fandaharana amin'ny fanendrena
Ny fitsidihana birao virtoaly dia azo alaina ao amin'ny Prairie Cardiovascular - HAMANTATRA BEBE KOKOA
Ny saron-tava dia takiana amin'ny fotoana voatendry
Aza adino ny mitondra saron-tava amin'ny fotoananao!
Mbola ilaina ny saron-tava any amin'ny toerana rehetra Prairie Heart any Illinois.
Nikaroka. Voaporofo. Mpitarika.
Ireo manam-pahaizana manokana momba ny aretim-po #1.
Ataovy izao ny fanendrena anao!
Vein, Vein Mandehana
Aza mijaly amin'ny aretin'ny lalan-drà foana!
Raiso ny fanombanana ara-pahasalamana vein
Mihoatra noho ny fonao.
Izany no ataontsika eto.
Tadiavo izao ny Dokoteranao!
Ny fitsidihana birao virtoaly dia azo alaina ao amin'ny Prairie Cardiovascular
Nandritra ny krizy COVID-19, Prairie Cardiovascular dia faly manolotra fitsidihana virtoaly amin'io andro io sy ny ampitso mba ho fiarovana sy hanamora ny marary.
Raha te handamina fotoana, antsoy azafady
Mitadiava Dokotera Prairie
Mitadiava Dokotera Fo Prairie izao
Tadiavo ny Dokoteranao
Misy ny fanendrena amin'ny andro mitovy sy amin'ny andro manaraka
Mpitarika amin'ny fikarakarana fo
Rehefa mila dokotera mihoatra noho ny dokotera ianao, rehefa mila manam-pahaizana momba ny fo ianao, dia manana ny valiny i Prairie Heart. Avy amin'ny kolesterola avo ka hatramin'ny fiakaran'ny tosidrà, ny aneurysms ka hatramin'ny arrhythmia, ny fanaintainan'ny tratra ka hatramin'ny fikarakarana fo, ny manam-pahaizana ao amin'ny Prairie Heart dia vonona ny hijoro eo anilanao mandritra ny dianao mankany amin'ny fo salama.
ALAHARO IZAO NY FANOKAFANAO
Fenoy ny taratasy etsy ambany.
Prairie Cardiovascular dia mpitarika nasionaly amin'ny fanomezana fikarakarana fo sy lalan-drà avo lenta sy manara-penitra. Tsy ho mora kokoa ny fanaovana fotoana miaraka amin'ireo Dokotera sy APCs kilasy manerantany.
Amin'ny alalanay ACCESS Prairie fandaharana, ny fangatahanao fotoana dia alefa soa aman-tsara any amin'ny ekipanay mpitsabo aretim-po tena voaofana. Izy ireo dia hanome anao fanampiana manokana amin'ny fanaovana fotoana miaraka amin'ny Dokotera sy APC izay mety indrindra amin'ny fitsaboana ny fonao sy ny filanao manokana.
Rehefa feno ny taratasy dia hisy mailaka azo antoka halefa any amin'ny ekipanay ACCESS Prairie mpitsabo mpanampy. Hahazo antso miverina ianao ao anatin'ny 2 andro fiasana.
Raha tsapanao fa hamehana ity dia antsoy ny 911 azafady.
Amin'ny famenoana ny taratasy dia manaiky handray fifandraisana avy amin'ny Prairie Heart ianao.
marary vaovao aho.
Kaody positaly *
Daty nahaterahana * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Laharana finday *
Dokotera sy APC (tsy voatery)
Toerana tiana (tsy voatery)
Antony mangataka fotoana ianao *
Na Miantso anay
Raha tianao ny hiresaka mivantana amin'ny olona iray dia azo atao ny miantso mpitsabo mpanampy 217-757-6120.
Manentana antsika ny tantara. Ny tantara dia manampy antsika hahatsapa fifandraisana amin'ny hafa. Ny tantara dia ampahany amin'ny zavatra lehibe kokoa noho ny tenantsika. Ao am-pon'izy ireo, ny tantara dia manampy antsika hanasitrana. Manasa ny rehetra izahay hamaky ny tantara etsy ambany ary hamporisika ny marary sy ny fianakaviany hizara ny tantarany manokana momba ny Prairie.
Fanofanana CPR amin'ny tanana ihany
Rehefa nianjera tamin'ny tany i Steve Pace, dia niantso 9-1-1 ny vadiny Carmen ary nanomboka nanery tratra avy hatrany. Tsy azony antoka fa nampiasa ny teknika mety izy, fa ny dokotera, ny mpitsabo mpanampy ary ny mpamaly voalohany dia manaiky fa ny hetsika haingana nataony dia namonjy ny ain'i Steve, nitazona azy ho velona mandra-pahatongan'ny fiara mpamonjy voina.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tantaran'ny fisainan'i Carmen haingana, ny ekipa ao amin'ny Prairie Heart Institute dia nanomboka ny fiofanana “Keeping the Pace – Hands Only CPR” mba hitondrana teknika mamonjy aina tsotra kokoa ho an'ny fiarahamonina.
Hands Only CPR dia natolotry ny American Heart Association ho an'ny olona tsy voaofana amin'ny CPR. Amporisihina ihany koa izy io amin'ny toe-javatra izay tsy ahafahan'ny mpamonjy voina na tsy te hanome rivotra amin'ny vava.
Raha hijery ny lahatsarin'ny Pace, raha te hianatra bebe kokoa na hangataka fivoriana CPR Hands Only ao amin'ny vondrom-piarahamoninao, azafady ny bokotra eto ambany.
Ara-dalàna ny fikorontanan'ny asa vaovao. Fa alaivo sary an-tsaina ny manomboka asa vaovao miaraka amin'ny pacemaker vaovao - ny voalohany any Etazonia ary ny faharoa maneran-tany nambolena tamin'ny fampiasana teknolojia fanadihadiana mba hitsaboana ny gadona fo haingana mampidi-doza. [...]
Fanoloana valizy aorta
Te haka fotoana kely aho ary hiteny hoe MISAOTRA ho an'ny ekipa TAVR!!! Niavaka izy ireo tamin'ny ambaratonga maro! Nanomboka tamin'ny Aprily 2013 izany rehetra izany. Torana ny rafozako malalako, Billy V. Williams, ary nolazaina fa mifandray amin'ny fony izany. Taorian'ny fitsapana maro, nisy ny fanapahan-kevitra […]
CABG, catheterization cardiac, Aretina
Namoy ny dadako aho tamin'ny 4 febroary 2017, 5 andro monja taorian'ny faha-89 taonany. Fony mbola zaza aho dia hitako foana ny raiko ho tsy azo resena. Izy no mpiaro ahy, mpanazatra ny fiainako, maherifoko!! Amin'ny maha olon-dehibe ahy, tsapako fa mety tsy ho eo foana izy saingy fantatro raha mbola nandeha tamin'ity [...]
Ny zavatra farany ilainao dia fandidiana izay mitaky fotoana fanarenana maharitra. Ao amin'ny Prairie Heart, manam-pahaizana manokana amin'ny fandidiana vaovao sy invasive kely indrindra izahay izay tsy vitan'ny hoe mahavita ny asa, fa mamerina anao ho tonga haingana kokoa noho ny fomba mahazatra.
Mianara bebe kokoa ary mahazo Recipe
Fikarakarana akaiky ny tranonao
Sambatra isika miaina ao amin'ny faritra misy vondrom-piarahamonina matanjaka izay mahazo aina sy afa-po. Saingy rehefa manana olana amin'ny fo izay mety mitaky fikarakarana manokana isika, matetika dia midika izany fa miatrika safidy handao ny fiaraha-monina misy antsika isika na ratsy kokoa, hanala ny fikarakarana. Tsy izany no mitranga rehefa omen'ny Doctors of Prairie cardiologists ny fikarakarana manokana anao. Ny filozofianay ao amin'ny Prairie Heart Institute dia ny hanome fikarakarana betsaka araka izay azo atao eo an-toerana. Raha tsy azo atao izany, dia avy eo ary avy eo ihany no aroso.
Mitadiava Dokotera sy APC akaiky anao
Ho fanampin'ny tranokala efa ho 40 manodidina an'i Illinois izay ahitan'ny cardiologists Prairie ny marary ao amin'ny toeram-pitsaboana eo an-toerana, dia misy fandaharana manokana ao Springfield, O'Fallon, Carbondale, Decatur, Effingham ary Mattoon.
Raha sendra ny soritr'aretin'ny aretim-po ianao dia antsoy ny Aza mitondra fiara.
Antsoy azafady 911 ary miandry fanampiana.
Dial, Aza mitondra fiara
Amin'ity taona ity fotsiny, Amerikana 1.2 tapitrisa no hiharan'ny vonjy taitra amin'ny fo. Indrisy anefa, eo amin'ny ampahatelon'ireo marary ireo no ho faty alohan'ny hahatongavany any amin'ny hopitaly noho ny antony lehibe iray - fahatarana amin'ny fandraisana fitsaboana tena ilaina.
REHEFA MISY MISY NY FANARINANA TOKOA, MAHARITRA – MIANTSO FOANA, TSY MITONDRA MADRAY.
Be loatra ny marary aretim-po mitondra fiara na misy mpianakavy mitondra azy any amin'ny hopitaly. Soa ihany fa misy fomba hanampiana amin'ny fampihenana ireo antontan'isa manimba ireo. "It's About Time" dia programa novolavolain'ny Chest Pain Network ao amin'ny Prairie Heart Institute of Illinois (PHII), mampifandray ny hopitaly sy ny masoivoho EMS ho an'ny fikarakarana haingana sy tsara indrindra ho an'ireo marary marary tratra. Antsoy foana ny 911 mba hahazoana fanampiana ara-pitsaboana - aza mitondra fiara mihitsy - rehefa misy soritr'aretina fampitandremana momba ny aretim-po.
Rehefa sendra ny soritr'aretin'ny aretim-po, ny segondra rehetra voatahiry dia mety midika ny fahasamihafana misy eo amin'ny fahasimban'ny fo tsy azo ovaina na toe-javatra azo tsaboina, ary na dia ny fiainana na ny fahafatesana aza. Amin'ny alàlan'ny fiantsoana 911 voalohany, manomboka ny fitsaboana rehefa tonga ny mpamonjy voina. Ireo matihanina EMS sy ireo mpamaly voalohany hafa dia afaka:
Tombano avy hatrany ny toe-javatra misy anao
Alefaso haingana any amin'ny hopitaly rehetra ao anatin'ny The PHII Chest Pain Network ny mombamomba anao sy ny EKG
Mitantana fitsaboana amin'ny fiara mpamonjy voina
Ataovy azo antoka fa hiandry sy ho vonona amin'ny fahatongavanao ny ekipan'ny fo ao amin'ny hopitaly
Manafaingana tsara ny fotoana manomboka amin'ny soritr'aretin'ny aretim-po ka hatramin'ny fitsaboana
Torohevitra momba ny fanomanana ny fitsidihanao
Ataovy azo antoka fa manana ny firaketana ara-pitsaboanao izahay
Raha ny dokoteranao manokana no nanoro anao tany amin'ny Prairie Cardiovascular, dia hifandray aminay amin'ny telefaona izy na handefa ny firaketanao any amin'ny biraonay. Tena zava-dehibe ny handraisanay ny firaketana ara-pitsaboana anao. Raha tsy izany dia tsy ho afaka hanombantombana anao araka ny tokony ho izy ny cardiologist anao ary mety ilaina ny mamerina ny fandaharam-potoanao mandra-pahazoana ireo firaketana ireo. Raha efa niresaka ny tenanao ianao dia tokony hifandray amin'ny dokoteranao ary handamina ny handefasanao ny rakitrao any amin'ny biraonay alohan'ny fitsidihanao. Ny tantaram-pitsaboanao taloha dia tena ilaina amin'ny fitiliana sy ny fitsaboana.
Ento ny fampahalalana rehetra momba ny fiantohana anao sy ny fahazoan-dàlanao
Rehefa manao fotoana miaraka aminay ianao dia hanontaniana ny mombamomba anao momba ny fiantohana izay hohamarininay alohan'ny fanendrena anao. Tokony hitondra ny karatry ny fiantohana sy ny fahazoan-dàlana hitondra fiara ianao amin'ny fotoana voalohany. Azonao atao ny mahafantatra bebe kokoa momba ny politika ara-bola amin'ny fiantsoana ny Departemantan'ny Fitantanam-bola ho an'ny marary.
Ento ny fanafodyo rehetra
Azafady, ento miaraka aminao ao anatin'ny fitoerany tany am-boalohany ny fanafody rehetra rehefa tonga any amin'ny birao ianao. Ataovy azo antoka fa fantatry ny dokoteranao ny momba ny zava-mahadomelina rehetra azonao, anisan'izany ny fanafody tsy misy fanafody sy ny fanafody raokandro. Ny fanafody iray dia mety hifanerasera amin'ny iray hafa, amin'ny toe-javatra sasany dia miteraka olana ara-pahasalamana lehibe. Azonao atao ny mahita endrika mora hitanisana ny fanafody rehetra Eto.
Fenoy ny Taratasy Vaovao momba ny marary
Tena zava-dehibe izany fampahalalana izany ary hanafaingana ny dingana amin'ny fahatongavanao any amin'ny birao. Hita eto ambany ny dika mitovy amin'ny taratasinao. Azonao atao ny mandefa fax any amin'ny biraonay mialoha ny fotoana amin'ny 833-776-3635. Raha tsy afaka manonta ireo taratasy ianao dia antsoy ny biraonay amin'ny 217-788-0706 ary angataho ny handefasana ireo taratasy ireo aminao. Ny famenoana/na ny fijerena ireo taratasy alohan'ny fanendrena anao dia hamonjy anao fotoana.
Fanekena momba ny fitsaboana
Taratasy Torolàlana Fanomezana
Jereo ny momba ny fampiharana ny fiainana an-tserasera
Ny fanadinanao: Inona no andrasana
Rehefa avy nameno ny fisoratana anarana ianao ary manana ny mombamomba anao manokana sy ny mombamomba anao momba ny fiantohana ny mpisoratra anarana, dia hitondra anao hiverina any amin'ny efitranom-panadinana ny mpitsabo mpanampy iray izay hakany ny tosidra sy ny fonao.
Ny mpitsabo mpanampy ihany koa dia haka ny tantaram-pitsaboanao mba hahitanao fa tsy ny fanafody raisinao ihany fa ny mety ho allergie na tsy fahazakanao, raha misy; inona no karazana aretina na ratra teo aloha izay mety ho niaretanao; ary izay fandidiana na fijanonana hôpitaly mety ho azonao.
Hanontaniana ihany koa ianao momba ny fahasalaman'ny fianakavianao, anisan'izany ny toe-javatra lova mety misy ifandraisany amin'ny fahasalaman'ny fonao. Farany, hanontaniana ianao momba ny toe-panambadianao, ny asanao ary raha mifoka sigara, toaka na zava-mahadomelina ianao na tsia. Mety hanampy anao ny manoratra ny zava-mitranga sy ny daty ara-pahasalamanao rehetra ary mitondra izany miaraka aminao amin'ny fitsidihanao.
Rehefa vita ny fitsaboana dia hihaona aminao ny cardiologista mba hijery ny tantaram-pitsaboanao ary hanao fizahana ara-batana. Aorian'ny fanadinana dia hiresaka momba ny zavatra hitany miaraka aminao sy ny fianakavianao izy ary manoro hevitra momba ny fitsapana na ny fitsaboana fanampiny. Aza misalasala manontany ny cardiologist izay fanontaniana mety anananao amin'izao fotoana izao. Ny dokoteranay dia mampiasa Mpanampy Dokotera sy Mpitsabo Mpitsabo izay efa voaofana manokana amin'ny fitantanana ny aretim-po mba hijerena marary indraindray. Raha izany no izy, dia hojeren'ny dokoteranao ny fitsidihanao.
Inona no mitranga aorian'ny fitsidihana voalohany?
Aorian'ny fitsidihanao amin'ny cardiologista, ny biraonay dia handefa ny firaketana momba ny fo rehetra, ny valin'ny fitsapana ary ny soso-kevitra momba ny fitsaboana amin'ny mpitsabo anao. Amin'ny toe-javatra sasany, mety hanomana fitsapana fanampiny izay ilainao hiverenanao izahay. Manana andrana sy fomba fiasa maromaro izahay—ny maro amin'izy ireo no tsy manafika—eo am-pelatananay izay tsy nanananay na dia 10 taona lasa aza mba hanampiana anay hamantatra ireo olana sy handaminana azy ireo haingana, mialohan'ny trangan'ny aretim-po rehetra.
Raha manana fanontaniana ianao dia antsoy ny mpitsabo aretim-behivavy anao. Noho ny hamaroan'ny antso isan'andro, dia hatao ny ezaka rehetra hamerina ny antsonao ara-potoana. Ny antso rehetra voaray aorian'ny 4:00 hariva dia averina amin'ny andro fiasana manaraka.
Fanampiana ankapobeny azo
Raha manana fanontaniana momba ny fitsidihanao ho avy ianao dia mifandraisa azafady.
Mangataka famoahana vaovao na firaketana
Ny Departemantan'ny Fanaraha-maso dia mizotra rehetra fangatahana famoahana vaovao momba ny marary. Mba hanampiana ny marary amin'ny fidirana amin'ny mombamomba azy manokana momba ny fahasalamany (dika mitovy amin'ny firaketana ara-pitsaboana), ny marary dia tokony hamita tsara ny Prairie Cardiovascular Consultants Fanomezana alalana hampiasa sy/na hanambara ny endrika arovana.
Ny taratasy fanomezan-dàlana feno sy nosoniavina ary misy daty dia azo averina amin'ny:
Attn: Departemantan'ny fanarahan-dalàna
NA E-mail: HIPAA2@prairieheart.com
NA fax mivantana any amin'ny Departemantan'ny fanarahan-dalàna: 833-776-3635
Fanomezana alalana hampiasa sy/na hanambara vaovao voaaro
Taratasy fanamarinana havana nahazo alalana
Inona avy ireo sara mifandraika amin'ny fangatahana firaketana ara-pitsaboana?
PCC manao tsy mandoa vola amin'ny marary, tobim-pahasalamana hafa, Dokotera sy APC, na ny Departemantan'ny Fitantanana ny Raharaha Veterans (VAA) amin'ny fangatahana kopia ny firaketana ara-pitsaboana marary.
Ahoana no ahazoako dika mitovy amin'ny firaketana ara-pitsaboana ahy?
Ny fanomezan-dàlana hampiasa/hamboraka ny vaovao momba ny fahasalamana arovana dia tsy maintsy hosoniavin'ny marary na ny solontenan'ny marary.
Mba hahazoana Fanomezana alalana hampiasa / hanambara ny mombamomba ny fahasalamana voaaro tsindrio Eto.
Tsindrio azafady Eto ho an'ny torolalana momba ny fomba hamenoana ny Fanomezana alalana hampiasa/hanehoana ny vaovao momba ny fahasalamana arovana.
Raha tsy afaka manonta ny taratasy ianao dia azafady Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fampahalalana mifandray.
Rehefa voarain'ny Departemantan'ny fanarahan-dalàna ny fanomezan-dàlana feno sy nosoniavina ary nomena daty dia halefa any amin'ny mpandray ny vaovao nangatahana.
Rahoviana no tapitra ny fanomezan-dàlana?
Ny fanomezan-dàlana dia tapitra 60 andro aorian'ny daty nanaovana sonia azy. Azonao atao ny mampiditra daty hafa ao amin'ny andalana fahatelo amin'ny pejy faharoa raha toa ka mitaky ny fanomezan-dàlana ho manankery mandritra ny 60 andro mahery. Ny fanomezan-dàlana dia tsy manan-kery mandritra ny fe-potoana mihoatra ny herintaona.
Aiza no halefako ny fanomezan-dàlana vitako?
Alefaso azafady ny fanomezan-dàlana rehetra:
Fanamarihana: Departemantan'ny fanarahan-dalàna
Inona ny laharana fax handefasana ny fanomezan-dàlana nataoko?
Azafady fax ny fanomezan-dàlana anao amin'ny 833-776-3635.
Afaka mandefa mailaka ve ny fanomezan-dàlana nataoko?
Eny. Ny fanomezan-dàlana feno dia azo alefa amin'ny mailaka HIPAA2@prairieheart.com
Inona no ilaiko handraisana firaketana ara-pitsaboana momba ny marary iray maty?
Ny fampahalalana momba ny fahasalaman'ny olona iray maty dia azo avoaka amin'ny fangatahana an-tsoratra avy amin'ny mpanatanteraka na mpitantana ny fananan'ny maty na solontena iray notendren'ny maty.
Ahoana raha tsy misy mpiasan'ny maty?
Raha tsy misy mpanatanteraka, mpitantana, na mpiasa ary tsy nanohitra manokana ny fampahafantarana ny firaketany ara-pitsaboana an-tsoratra ilay olona, ​​dia azo avoaka ny fampahalalana momba ny fahasalaman'ny olona maty rehefa nahazo ity taratasy manaraka ity: Taratasy fanamarinana havana nahazo alalana
Hafiriana vao azoko ny firaketana ara-pitsaboana ahy?
Ho an'ny famoahana ny firaketana ara-pitsaboana dia mety haharitra 30 andro vao azo ny rakitrao. Mikarakara ny fangatahana amin'ny filaharana voaray izahay. Na izany aza, ny fanendrena, ny fomba fiasa ary ny vonjy taitra ho avy dia karakaraina ho fangatahana STAT.
Mety ho afaka mandamina fangatahana izahay amin'ny andro iray ihany, raha toa ka feno sy azo alaina ny mpiasa sy ny fampahalalana. Azonao atao ny mifandray amin'ny Departemantan'ny Fanaraha-maso mba hijery ny toetry ny fangatahanao.
Iza no mikarakara ny famoahana ny firaketana ara-pitsaboana ahy?
Ny Departemantan'ny fanarahan-dalàna no mikarakara ny fangatahana firaketana rehetra.
Afaka manao sonia taratasy fanomezan-dàlana ve aho ary maka ny firaketana ara-pitsaboana miaraka?
Azafady mba mifandraisa amin'ny Departemantan'ny fanarahan-dalàna mba handaminana ny fikarakarana ny firaketana ara-pitsaboana, ny fotoana fakana ary ny fanaovana sonia fahazoan-dàlana. Ny Departemantan'ny fanarahan-dalàna dia mila fotoana ampy handaminana ny fangatahana ary hiantohana ny famoahana araka ny tokony ho izy ny fomba fiasa momba ny mombamomba ny marary.
Afaka maka ny antontan-taratasiko ara-pitsaboana ve ankoatra ny marary?
Eny, azo avoaka amin'izay rehetra tondroin'ny marary amin'ny fanomezan-dàlana ny firaketana. Ilaina ny ID sary rehefa maka ny firaketana ara-pitsaboana.
Afaka mampiasa fangatahana mitovy ve aho handefasana rakitra any amin'ny toerana samihafa?
Tsia. Mitaky fanomezan-dàlana misaraka izahay isaky ny toerana.
Mila fahazoan-dàlana mitokana ho an'ny dokotera PCC tsirairay ve aho?
Tsia, manana firaketana ara-pitsaboana elektronika iray ny PCC. Apetraka ao anaty tabilao iray ny firaketana ara-pahasalamanao rehetra.
Nahoana no tsy maintsy an-tsoratra miaraka amin'ny daty nanaovana sonia ny fanomezan-dàlana?
Mba hanamarina ny fanomezan-dalana ny marary hamoaka ny vaovao momba ny fahasalamana.
Raha misintona ny Prairie Heart Institute of Illinois APP amin'ny findaiko na takelaka aho na misoratra anarana amin'ny gazetinao, ahoana ny fampiasanao ny mombamomba ahy?
Tsy manangona fampahalalana manokana avy amin'ny Prairie Heart App izahay. Ny vaovao ampidirinao dia voatahiry amin'ny telefaona na findainao ihany ary tsy angonin'ny Prairie Cardiovascular na ny Prairie Heart Institute of Illinois na amin'ny fomba rehetra. Raha misafidy amin'ny gazetinay ianao dia ny adiresy mailakao ihany no voatahiry mba handefasana anao ny gazetiboky. Prairie Cardiovascular sy ny Prairie Heart Institute of Illinois dia tsy hivarotra na oviana na oviana ny adiresy mailakao ary azonao atao ny miala amin'ny fotoana rehetra.
Ampidino ny fampiharana Prairie
Ny Prairie Heart Institute App dia manamora ny fifandraisana. Miaraka amin'ny fipihana bokotra iray, mitadiava dokotera Prairie Heart na mitondra toromarika mankany amin'ny toerana Prairie Heart akaiky anao. Ao anatin'ny fampiharana, ny fizarana karatra kitapom-bola nomerika “MyPrairie” dia ahafahanao mitahiry ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny dokoteranao, ny fanafody, ny allergie, ny fampahalalana momba ny fiantohana ary ny fifandraisana amin'ny fivarotam-panafody.
Download ho an'ny iPhone
Misintona ho an'ny Android
Fanamarihana momba ny tsy fanavakavahana: anglisy
Fanampiana amin'ny fiteny: Deitsch | Deutsch | Espaniola | français | Hmoob | Italiana | Polski | Tagalog | Tiếng Việt | Rosiana | اُردُ | العربية | हिंदी | ພາ ສາ ລາວ | 한국어 | 繁體 中文
Prairie Cardiovascular dia Dokotera sy APC amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana sy fitsaboana aretim-po amin'ny toerana maro manerana an'i Illinois afovoany. Ny fikambananay dia manome ny cardiologists tsara indrindra ao amin'ny fanjakana, miaraka amin'ny fepetra fandidiana malaza sy toro-hevitra matihanina momba ny olana mifandray amin'ny fo. Izahay dia manao fitiliana sy mitsabo ny soritr'aretin'ny fo rehetra toy ny fanaintainan'ny tratra, ny fiakaran'ny tosidrà, ny tosidra ambony, ny fimenomenona, ny aretim-po, ny kolesterola ambony ary ny aretina. Manana toerana maromaro izahay ao anatin'izany ny tanàna lehibe toa an'i Decatur, Carbondale, O'Fallon, ary Springfield.
Programa fanampiana ara-bola HSHS